Ntuzi Kachasị maka Mette Pinterest | Martech Zone
Thursday, August 15, 2013 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Anyị na-enweta ezigbo okporo ụzọ okporo ụzọ si Pinterest. Ọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụhaala na ọkwa anyị na Pinterest na-agbanwe agbanwe. O nyekwara aka mgbe anyị wụnye Pinterest Pin ya Button N'ihi Images - ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ na ị ghaa onyinyo dị n’okpuru. Ọtụtụ mmadụ ole na ole na-ekekọrịta akwụkwọ akụkọ anyị.
Anyị Ahịa Infographics ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eso 1,000 ma anyị ejiri obi eziokwu na-eme obere mpụga nke izipu akwụkwọ ozi anyị n'ebe ahụ! Ihe metrik anyị na-elekwasị anya na ya bụ ihe ruru ndị ọbịa ole anyị na-enweta na saịtị anyị site na Pinterest na otu ha si agbanwe ma ọ bụ soro ndị na-akwado anyị mee ihe.
Ulo oru di nma iji Pinterest - lee ndi ahia anyi, Ndepụta Angie, na mbadamba ha. Ha na-arụ ọrụ dị egwu na-ejigide mbadamba iri na abụọ nwere ọdịnaya dị egwu. Ọ bụrụ na ị na-eji Pinterest maka mbọ ị na-agba n'ịntanetị, enwere ọnụọgụ ole na ole ị ga-ama. Ejiri Ndi mmadu tinye ihe omuma a na ihe ndepụta zuru ezu nke usoro Pinterest ị nwere ike nyochaa na otu ọma mgbalị gị na-arụ ọrụ.
Tags: pịacomments-eso ụzọMmetụtammekọrịtaamasịatụdoPinterestPinterest ahịametriki pinterestpinterest nsusoiruna -agba ọsọọsọ ọsọ